Dịkwuo Okporo ụzọ site na Optimizing Kwusaanụ Times | Martech Zone
Mụbaa Okporo ụzọ site na Imecha Oge Na-ebipụta
Ka anyị gara n'ihu na-arụ ọrụ dịkwuo okporo ụzọ afọ gara aga, otu n’ime ebe ndị anyị lere anya nke ọma bụ oge ụbọchị anyị na-ebipụta akwụkwọ blọgụ. Ndudue nke otutu ndi mmadu n’eme bu ilele okporo uzo ha anya site na elekere ma jiri ya mere ntuziaka.
Nsogbu bụ na ị na-elele okporo ụzọ site na elekere elekere na oge gị nchịkọta naanị gosipụta okporo ụzọ na mpaghara oge gị, ọ bụghị mpaghara nke onye na-ekiri ya. Mgbe anyị mebiri okporo ụzọ anyị site na mpaghara oge, anyị chọpụtara na ngwa ahịa anyị kachasị mkpa bụ ihe mbụ n'ụtụtụ. N'ihi ya, ọ bụrụ na anyị na-ebipụta na 9AM EST, anyị abịala n'oge. Ọ bụrụ na ị na saịtị ma ọ bụ blog bụ na Central, Pacific ma ọ bụ ndị ọzọ oge zones… ị ga-achọ ka ịtọọ oge a post kụrụ na 7:30 AM ka 8AM Est ụgbọala kacha okporo ụzọ na-elekọta mmadụ nkekọrịta.
N'otu aka ahụ, ka anyị na-ele anya ibipụta post n'ehihie, anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị agaghị eme ya mgbe 5PM EST gasịrị, ma ọ bụghị ya, ọtụtụ ndị agaghị ahụ post ahụ ruo echi. Ọ bụrụ na anyị ga-ebipụta posts 3 n'otu ụbọchị, anyị ga-achọ ibipụta ha tupu oge agafee iji bulie ikpughe nke ọdịnaya anyị. Ọ bụrụ n’ị nọ na mpaghara oge Pacific, ịchọrọ ibipụta n’etiti 4:30 AM PST na 2PM PST! Ya mere… ị kacha mma ịmụta ka ịtọọ oge posts belụsọ na ịchọrọ ihi ụra!
Nchịkọta mmekọrịta gbasara mmekọrịta
International Text Izi ozi Statistics
Ọkt 17, 2011 na 9:33 AM
Onye ahịa jụrụ nso nso a mgbe oge kacha mma bụ ikesa ọdịnaya. Ọ bụ nnukwu ajụjụ na n'ezie nwere ike ịdịgasị iche dabere na ebumnuche ndị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ị na-elekọta ìgwè mmadụ kọleji, ha na-eme nchọgharị na webụ n'oge dị iche iche karịa ndị 9-5'ers. Ụzọ kacha mma gị bụ ime ụfọdụ nnwale iji chọpụta ihe kacha mma.
Ọkt 17, 2011 na 10:29 AM
Nick – ị kwuru eziokwu. kpam kpam dabere na ndị na-ege ntị! M nnọọ na-ahụ ụfọdụ folks na-eleghara timezones na-aghọtaghị na e nwere ndakpọ na okporo ụzọ ka anyị na-esi na mpaghara ruo na mpaghara.
Ọkt 17, 2011 na 10:46 AM
Nnukwu isiokwu na kwekọrọ na ihe anyị na-ahụ. A na-enye gị mma ka ị biputere tupu okporo ụzọ kwa ụbọchị karịa n'oge.
Ọkt 17, 2011 na 9:49 PM
Ahụla m njikọ aka kacha mma na-eme n'ụtụtụ. ọ bụrụ na m hazie tweet m ma ọ bụ mmelite facebook maka azụmahịa m ma ọ bụ ndị ahịa m. Daalụ maka ịkekọrịta Doug a.